News 18 Nepal || प्रदेश ५
२२ वर्षीया युवतीले विष खाएर किन दिइन् ज्यान ?
काठमाडौं । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-१ दुबियामा एक युवतीले विष खाएर ज्यान दिएकी छन् । सल्फास नामक विषादी सेवन गरेर २२ वर्षीया मनिता यादवले ज्यान दिएकी हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तथा प्रवक्ता खड्क बहादुर खत्रीका अनुसार मंसिर ३० गते विष सेवन गरेकी यादवको सोमबार उपचारको क्रममा निधन भएको हो । यादवको मेडिकल कलेज भैरहवामा उपचारको क्रममा ज्यान गएको डीएसपी खत्रीले जानकारी दिए । घटनाको प्रकृति हेर्दा...
नवलपरासी पूर्वका थप ३ संक्रमितको निधन, को हुन् उनीहरु ?
नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ३ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईंका अनुसार गैंडाकोट नगरपालिकाका ३८ वर्षीय एक पुरुषको शनिबार साँझ चितवन मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको हो । त्यसैगरी कावासोती र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा एक एक जनाको ज्यान गएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्किबासकी ६४ वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकलमा निधन भएको हो । त्यस्तै कावासोती नगरपालिका–११ का ४८ वर्षीय पुरूषको...
बुटवलमा उपचाररत दुई संक्रमितको निधन, को हुन् उनीहरु ?
बुटवल । बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत थप दुई संक्रमितको निधन भएको छ । ज्यान जानेमा रूपन्देहीको तिलोत्तमाका महिला र बुटवलका पुरुष छन् । तिलोत्तमा ११ की ५० वर्षीया महिलाको सोमबार राति ८:१७ बजे ज्यान गएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । कात्तिक १० गते स्वास्थ्यमा समस्या आएर पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । यस्तै बुटवल १३ का ५२ वर्षीय पुरुषको पनि...
नवलपरासी । कावासोतीमा कोरोना संक्रमणबाट ९ दिनको फरकमा आमाछोरीको ज्यान गएको छ । ज्यान गएपछि आएको पीसीआर रिपोर्टमा दुवै जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो । कावासोती नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शारदा अधिकारीका अनुसार पिठौली चोककी ४० वर्षीया महिलाको बुधबार बिहान घरमै ज्यान गएको थियो । चार दिनपछि आइतबार आएको रिपोर्टमा उनलाई कोरोना पुष्टि भएको हो । असोज २६ गते घरमै निधन भएकी उनकी आमाको पनि पछि रिपोर्ट आउँदा कोरोना देखिएको थियो...
आयल निगम परिसरभित्रै ट्यांकरमा कसरी भयो आगलागी ?
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ७, भलवारीस्थित नेपाल आयल निगम परिसरमा एउटा ट्यांकरमा आगलागी भएको छ । आयल निगमको डिपोभित्र भारतबाट तेल लिएर आएको पेट्रोल ट्यांकरमा बिहीबार दिउँसो आगलागी भएको हो । भारतबाट ल्याईएको पेट्रोल डिपोमा चेकजाँच गरिसकेर ट्यांकर स्टार्ट गर्दा अकस्मात ब्याट्री सर्ट भएर आगलागी भएको आयल निगम भवलारीले जनाएको छ । पेट्रोल भरिएको लु १ ख ८१४५ नम्बरको ट्यांकरमा आगलागी भएको हो । तत्काल नेपाली सेना...